Site na: KongoLisolona: Ọktoba 17, 2020 03: 13 Enweghị asịsa
Anyị nọ na 1988 na mbu Zaire. Mobutu Sese Seko enweghị obi abụọ na afọ abụọ mgbe nke ahụ gasịrị, na nrụgide nke ihe omume ime na nke mpụga, a ga-amanye ya ịhapụ ọchịchị ya nke na-adịghị mma. Mana, tupu nke ahụ, na Jenụwarị 17 nke "afọ amara 1988", onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị Zairian na-achọ ịme nke ọma nzuzu: jide nzukọ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị amachibidoro, ndịUDPS (Union maka ochichi onye kwuo uche ya na oha na eze), na obi nke Kinshasa na akwa Kasavubu (akwa Ngabi).
Anyi aghaghi iweghachite ihe omume na onodu ochichi nke oge a. Nke a bụ akara mkpuchi ihu igwe n’eluigwe na ọchịchị. Le Président-fondateur du MPR Bụrụ eze hegemonic. O nwere ikike ịdị ndụ na ọnwụ na nwa amaala Zairian ọ bụla n'okpuru ụjọ nke usoro anachronistic chịkọtara: « Olinga, olinga te oza na kati ya MPR ”, nke pụtara“ Ma ịchọrọ ma ọ masịghị, ị bụ onye otu MPR (ngagharị Mgbanwe ọha ewu) nke Onye Isi Nchoputa Mobutu »MMana nwoke nwere obi ike machibidoro ya n'ihe ize ndụ nke ndụ ya ma gbochie obere ọnyà nchebe Mobutist gburugburu ebe obibi ya nke Limeté. Ọ banyere n'ụzọ zuru ezu na ndọrọ ndọrọ ọchịchị akụkọ ihe mere eme nke Congo-Zaire rue taa.
Ọ bụ ebe ahụ ka o doro anya na amụrụ obi ike ndọrọ ndọrọ ọchịchị a nke na-agaghị ahapụ ya n'ọgụ ya maka ọbịbịa nke iwu iwu n'ime obi ụmụ mmadụ. Ọ nwere site a ogbugbu na-enweghị na-anwụ anwụ na-ekwu okwu, na " Mokako sua des bankoko ”.
Colette Braeckman, na The Dinosaur na p. 334, na-akọghachi ihe omume ahụ: « Le 17 janvier 1988, le jour d’anniversaire de la mort de Patrice Lumumba, Tshisekedi na-akpọ oku a ma ama na etiti Kinshasa, na nso akwa mmiri ahụ Kasa vubu. Ndị agha na-etinye aka, na-akpata ọtụtụ ọnwụ na mmerụ ahụ. Tshisekedi na-interned n'ụlọ mkpọrọ nke Makala. Iji mebie uche ndị mba ụwa, gọọmentị chepụtara atụmatụ ọhụrụ: ndị na-agwọ ọrịa uche site na Center Neuro-Psychopathological kwupụta ya n'uche "deranged", na-ata ahụhụ site na paranoia (Editor si dee: dọkịta Tharcisse Loseke avait refusé de se prêter à ce simulacre.)
N'ezie, ọ dị mkpa iwe ara iji nwaa ịgba akaebe na nkwenye nke Mobutu n'isi obodo ya! Ebugara ya Isiro, wee gaa Dungu, na mgbago ugwu ọwụwa anyanwụ nke Zaire, n'ikpeazụ n'obodo nta ahụ Ngbandi de Monga, na nso ókè Sudan, Tshisekedi n’enweghị enyemaka n’ịhụ nnọkọ mmanye nke ọtụtụ ndị njem ibe ya, ndị laghachiri otu oriri (MPR, Otu-Steeti). Ọ na - eme ka ọ kwụsị ịlụ ọgụ ahụ, mana ọ na - anọgide na mba ahụ dị ka ihe nnọchianya nke iguzogide ”.
Ihe nnọchianya nke nguzogide dị n'ime na 1988, akara nke nguzogide dị n'ime na 2014: na obi ike ọchịchị, agbakwunyere nkwụsị na-adịghị ada ada n'agbanyeghị mmechuihu, ngọnarị, aghụghọ, njide, ịdapụ na ụlọ obibi ndị a na-elekọta.
Ma anyị masịrị ya ma ọ bụ na anyị achọghị, ma anyị katọrọ ya ma ọ bụ ghara ịkatọ ya, mgbe ụfọdụ n'ihi ọgụ ya, ndị Congo nwere ike ịkwụsị mgbe ụfọdụ ịsị: daalụ maka nnọgidesi ike, wee laghachi na-akatọ ya ma ọ bụrụ na ọ dị ha ka ọ dị ya. Karịsịa ebe ọ bụ na ọgụ ya bụ nke onye kwuo uche ya na ndị nkatọ bụ akụkụ ya.
Nlekọta ụlọ na Etienne Tshisekedi Wa Mulumba !
Ọrụ ncheta: ogbugbu nke Thomas Sankara - Ọktọba 15, 1987, ọ bụ ụbọchị ụfọdụ Burkinabès rere mkpụrụ obi ha nye Ekwensu ka ọ were ndụ nke akara ngosi ahụ, Black / African, Thomas Sankara "Otu na ihe kpatara ụmụ anyị ji nwee ike mara akụkọ banyere Christopher Columbus nke ọma ma leghara nke Thomas Sankara anya? "
Ọkt26 11: 13